> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado Photos & Videos ka LG Optimus
Files qaar ka mid ah tirtiray ka LG Optimus laakiinse haatan waxaad dib u doonayaan, ama waxaa laga yaabaa kaliya si qalad ah aad formatted aad telefoon oo aad rabto inuu ka soo kabsado dhan sawiro iyo videos aad? Haddii ay sidaas tahay, taasi waa meesha kugu habboon. Halkan waxaan idin tusin doonaa sida inuu ka soo kabsado photos lumay iyo videos ka LG Optimus. Akhri wixii faahfaahin ah.
Marka photos, videos iyo music waa la tirtiray ama formatted ka LG Optimus, dad badan u malaynayaan in ay ka baxeen iyo maba jirtaba. Dhab ahaantii, ma ahan mid run ah. Files kuwa kaliya noqon aan la arki karin, oo meeshii ay qabsadeen on kaadhka xusuusta waxa lagu calaamadiyaa sida loo heli karo files cusub. Files Your hore ay u tirtirayaa oo kaliya marka ay overwritten by files cusub.
Si aad u qabtaan soo kabashada sawir LG Optimus, waxaad u baahan tahay qalab kabashada LG Optimus ah marka hore. Haddii aanad haysan mid ka mid ah weli, halkan waa talo: Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac . Labaduba waa software xirfad leh oo lagu kalsoonaan karo, taas oo awood aad ka bogsato tirtiray, formatted photos, videos iyo music ka LG Optimus Q, LG Optimus V, LG Optimus 2x, iyo ka badan, iyada oo aan khasaaro tayada wax. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay 3 tallaabooyin ay ku dhameeyaan hawsha oo dhan.
Isku day version maxkamad free of this LG Optimus software kabashada sawirka hadda. Dooro version saxda ah ee computer.
Fiiro gaar ah: si fiican u Ilaalinta aad telefoon ama kaadhka xusuusta ka dib shilka idiin xaqiijin karaa fursad fiican inuu ka soo kabsado photos tirtiray, videos ka LG Optimus. Iyo fadlan xasuuso in lagu badbaadiyo natiijada scan haddii aad ku socoto inuu ka soo kabsado faylasha helay ka dib, si looga hortago khasaaro xogta.
Waxaad kaloo isku dayi kartaa adigoo isticmaalaya Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) inuu ka soo kabsado videos iyo sawiro ka card SD gudaha telefoonka LG Optimus. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay ku xidhmaan aad telefoon si computer iyo iskaan for photos lumay iyo video on HTC dareen toos ah barnaamijka.
Kabsado photos & videos ka LG Optimus in 3 Talaabooyinka
Step1. Connect aad LG Optimus in kombiyuutarka
Si aan ku bilaabo, xiriiriyaan phone in kombiyuutarka la cable ah digital. Ama waxaad toos ah ku xidhi kartaa kaadhka xusuusta aad by akhristaha kaarka sida aad rabto. Markaas aan bilowno barnaamij iyo cilck "Start" in interface ugu muhiimsan si ay u bilaabaan soo kabashada sawir LG Optimus.
Step2. Sawirka photos & videos badiyay LG Optimus
Next, aad arki doonaa telefoonka waxa lagu ogaan karaa barnaamijka halkan. Waxaa Dooro oo guji "Scan" si aad u ogaato dhammaan faylasha lumay oo ay ku jiraan sawirrada, video iyo files audio ee aad taleefan LG Optimus.
Step3. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan sawirada & video
Marka sawirka dhameystiray, waxaad ku eegaan karo kuwa photos recoverable si loo hubiyo tayada hor soo kabashada. Videos aan laga hadda previewed. Waxaad calaameysaa kuwa faylasha aad rabto oo wuxuu oofin kabashada adigoo gujinaya "Ladnaansho" in ay iyaga oo dhan la badbaadiyo on your computer ka mid ah.
Fiiro gaar ah: Ha mar badbaadin xogta soo kabsaday aad LG Optimus ama kaadhka xusuusta. Raadi meel kale, waayo, sida on your computer ama disk kale dibadda, Ammaanka awgiis.
Video tutorial soo kabashada sawir LG Optimus